'जनमत पार्टी' अस्तित्व, पहिचान र समृद्धिको लागि संघर्ष गर्छ : नेता कुशवाहा
जनताको मतलाई सर्वोपरी मान्ने, लोकतन्त्रलाई स्वीकार्ने पार्टीसँग जनता कहिल्यै असन्तुष्ट हुँदैनन् ।
प्रकाशित मिति : ८ चैत, २०७५ | ०८:५०:००
नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच २०७५ फाल्गुन २४ गते ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भयो । गठबन्धनको ३ र ४ गते सिरहाको लहानमा चलेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) को अध्यक्षतामा ‘जनमत पार्टी’ को घोषणा भयो ।
नेपाल सरकार र डा. सिके राउतको समर्थन, बिरोधमा आजभोली राजनीतिक माहौल तातेको छ । होली पर्वले केही साम्य गरेपनि अझै केही दिनसम्म बहस जारी नै रहन्छ । यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद्मा सहभागि नेता सुदिप राज कुशवाहासँग गरिएको कुराकानीको अंश :
जनमत पार्टी घोषणा भयो, अबको कार्यदिशा के हो ?
– हामिले ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाएका छौं । त्यसै अनुरूप पार्टीको घोषणा भएको हो । अब पार्टीको दर्ता लगत्तै केन्द्रीय समतिको विस्तारित बैठकबाट आगामी कार्यविधि निर्धारण हुन्छ ।
पार्टी घोषणापछि गठबन्धनका कार्यकर्ता र जनता असन्तुष्ट छन् नि ?
– गठबन्धनका कोही पनि नेता र कार्यकर्ता असन्तुष्ट छैनन् । पार्टी घोषणा नेता र कार्यकर्ताको सल्लाह, सुझाव र रोडम्याप अनुसार भएको हो । पार्टी घोषणा लगत्तै परिषद्का सबै सदस्यहरु ‘जनमत पार्टी जिन्दावाद, डा. सिके राउत जिन्दावाद’ भन्दै स्वागत गरे । चैत ५ गते लहानदेखि भारदह सम्मको स्वागत र्यालीले नै प्रष्ट हुन्छ कि कार्यकर्तामा उल्लास छ । विजयीको उत्सव मनाएका छन् सबैले । र, जनता त असन्तुष्ट हुनै सक्दैनन् । जनता त चाहन्छ कि छिटो डा. सिके राउत हामी माझ आओस् । पर्खेर बसेका छन् आम जनता । बरू हाम्रो नाममा पेट पाल्नेहरु असन्तुष्ट होलान् । जनताको जनअभिमतलाई कदर गर्ने, जनताको मतलाई सर्वोपरी मान्ने, लोकतन्त्रलाई स्वीकार्ने पार्टीसँग जनता कहिल्यै असन्तुष्ट हुँदैनन् ।
सुदिपराज कुशवाहा, जनमत पार्टी केन्द्रीय नेता
तपाईहरु आफ्नो एजेन्डा (अलग मधेश) बाट किन पछि हट्नु भयो ? केही नेताहरुले डा. सिके राउत आत्मसमर्पण गर्यो भन्दै छन् ?
– हाम्रो एजेन्डालाई नेपाल सरकार जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत छन् । यसमा अघि–पछि हट्ने कुरै आउँदैन् । ११ बुँदे सहमति पढनुस् । अब हामीलाई जनतामा जाने वातावरण बनेको छ, जनता जे चाहन्छ त्यही हुन्छ । र, जनताको अभिमत स्वीकार्ने पार्टीलाई आत्मसमर्पण गर्यो भन्नु अपराधिक मानसिकता हो । राज्यले यस्तालाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण मार्गलाई मुल मन्त्र ठान्ने व्यक्तिलाई आत्मसमर्पण गरेको हो भन्नु आतँकी मानसिकता हो ।
मुख्यमन्त्रीजीले त डा. सिके राउतको कार्यकर्ता ६ महिनापछि नभेट्ने भन्दैछन् । अघि आर्जन गर्नुभएको साख र लोकप्रियता घटेकै हो त ?
– मन्त्री, मुख्यमन्त्री के भन्यो त्यो उहाँको विश्लेषण होला । डा. सिके राउत खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भएपछि धेरै नेताज्यूहरु बोल्दा बोल्दै गडबडी हाल्नुहुन्छ । आफु र आफ्ना कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न त्यसो भनेको हुनसक्छ । मेरो खुल्ला चुनौती छ, महिनापछि एकै ठाउँमा सभा होस् । सब थोक थाहा हुन्छ । हामी स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्छौं । कसैसँग बैमन्सयता गरेनौं र गर्दैनौं । हामी नकारात्मक आलोचनाभन्दा सहयोग र सहकार्यमा विश्वास गर्छौं ।
‘जनमत पार्टी’लाई जनताले किन विश्वास गर्ने ? सबै राजनीतिक दल त उस्तै हो नि पद र पैसामा लिप्त ?
– राम, श्याम भन्ने व्यक्ति परिक्षामा फेल भयो भन्दैमा अरुपनि फेल हुन्छ भन्ने छैनन् नि । जहाँसम्म विश्वासको कुरा छ, हामी जनतालाई रोडमा गोली खान पठाएर अरु जस्तो मन्त्री पद खान गएका होइनौं । हामीले चरम रँगभेद, विस्थापन, उपनिवेश लगायतका मुद्दाहरु उठाएको कुरा जनता जानिसकेका छन् । अब जनताकÞो अभिमतबाट नै समाधान हुने भएकोले जनता विश्वास गर्छन् । हामी मधेशको अस्तित्व र पहिचानको लागी चिन्तित छौं । पद र पैसाका लागि दल खोलेको भए त्यो ६ बर्ष अघि नै खोलिन्थ्यो । अहिले आएर होइन् । ‘जनमत पार्टी’ मधेशी जनताको अस्तित्व र पहिचानको लागि संघर्ष गर्छ । समृद्धि र विकासका लागि संघर्ष गर्छ । जनमत पार्टी जनताको पार्टी हुन्छ, पद र पैसाको होइन् ।